Mareynkanka oo si rasmi ah u sharxay Duqeyntii Galmudug & Cida ay la damacsanaayeen.. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareynkanka oo si rasmi ah u sharxay Duqeyntii Galmudug & Cida ay la damacsanaayeen..
A warsame 1 October 2016
Safiirka dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay baaritaan dheeraad ay ku sameyn doono ciidankii dhawaan lagu laayay duleedka Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Safiirka ayaa xusay in dowladda Mareykanka ay qirsan tahay in aysan jirin shacab ku dhintay duqeyntii ka dhacday duleedka Magaalada Gaalkacyo.
Safiirka ayaa sheegay in wasaarada Gaanshaandhiga ee dowladda Mareykanka ay diyaar u tahay in ay baarto oo ay Jawaab ka bixiso duqeyntii lagu qaaday Ciidanka Galmudug ee Saldhig ku lahaa duleedka magaalada Gaalkacyo.
Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa sheegay in dowladda Mareykanku aysan ogeyn ilaa iyo hada in cid rayid ah ay wax ku noqotay duqeyntii Gaalkacyo.
” Dhabtii waa wax lagu xumaada hadii ay jirto dad shacab ah oo ku dhintay duqeyntii Gaalkacyo , waxaa wasaarada Gaanshaadhiga ay hada ku qanacsan tahay in aysan jirin cid shacab oo wax ku noqontay , laakiin diyaar ayaa u nahay inaan baarno oo aan jawaab ka bixo duqeyntii Gaalkacyo ” ayuu yiri Stephen Schwartz
US and South Korea will “pay the price” for their decision to deploy an advanced missile defence system -china paper